Ebe ahia - IntoKildare
Kụrụ ụlọ ahịa ahụ!
N’ebe ọ bụla njem gị na County Kildare na-akpọrọ gị, ị nwere ike ijide n’aka ịchọta ụlọ ahịa ọdịnala, ụlọ ahịa dị elu na ebe a na-azụ ahịa nwere ọtụtụ nzube. Ya mere, ihe ị na-eche? Inyocha ụlọ ahịa Kildare ma hụ akụ dị oke ọnụ ahịa ị nwere ike ịchọta.
Kildare juputara na obodo na obodo na -eme mkpọtụ nke na -enye ọtụtụ nhọrọ ịzụ ahịa, site na ụlọ ahịa zoro ezo ruo nnukwu ụlọ ahịa jupụtara na nnukwu aha na azụmaahịa. Isi ihe gụnyere Obodo Kildare na Ngwongwo ọla ọcha Newbridge ebe ndị ọbịa na ebe ngosi nka akara ngosi akara ngosi, ha abụọ na -atụgharị Co. Kildare n'ime ebe ejiji na Ireland.
14 nsonaazụ (s)
Ewubere Berney Bros na nka, ogo na ihe ọhụụ na ihe niile ịchọrọ maka ịnyịnya na onye na-agba ya.
Dee Brophy Ihe eji achọ mma
Chọta onyinye zuru oke na nhọrọ nke ọkụ eji achọ mma, enyo, textiles, arịa ụlọ na ihe salvaged.
Seramiiki art studio na kọfị mmanya ebe ndị ọbịa nwere ike tee ihe ha họọrọ ma tinye mgbakwunye aka onwe ha dị ka onyinye ma ọ bụ ihe oriri.
Ogige Johnstown Ogige
Nhọrọ osisi kachasị ukwuu na Ireland na Gardenlọ Ahịa na ikuku ikuku nke oge a, ụlọ oriri na ọéụéụ na Café Gardens.
Mongey Communications bụ azụmahịa ezinụlọ nwere na Kildare nke tolitere wee bụrụ ọrụ teknụzụ nkwukọrịta dị oke egwu.
Ndị na -egbu anụ Nolan
E guzobere Nolans Butchers na 1886 wee guzobe ya n'okporo ụzọ nke obere obodo dị na Co.Kildare nke ụmụnna Nolan mara dị ka Kilcullen.
Ụlọ ọrụ mmanya ịgba ọtọ
Nude Wine Co. bụ mmanya dịka ebum n'uche ya. Ha na -enwe agụụ maka mmanya ma kwenyere na ị na -abịaru nso na okike, ọ ga -adịrị onye ọ bụla mma.
Waterlọ ahịa Whitezụ ahịa Whitewater
Whitewater bụ ụlọ ahịa azụmahịa kachasị ukwuu na Ireland yana ụlọ karịrị 70 nnukwu ụlọ ahịa.